`वलात्कारी’ बचाउन नेताको फोन ! – www.agnijwala.com
`वलात्कारी’ बचाउन नेताको फोन !
काठमाडौँ – बलात्कारीले राजनीतिक संरक्षण पाउने क्रम बढेको छ ।
पछिल्ल्लो समयमा बलात्कारका अधिकांश घटनामा अपराधीलाई जोगाउने दबाबसहित नेताहरुको फोन आउने गरेको रक्षा नेपालकी अध्यक्ष मेनुका थापाले बताइन् ।
केहि दिन अघिमात्रै पनि ठमेलमा पक्राउ परेका एक रिक्सा चालकलाई छुटाउन एक पार्टीका नेताले ‘उ हाम्रो पार्टीको मानिस, रिक्सा चालक संगठनको व्यक्ति हो’ भन्दै उनलाई दबाब आएको थियो । अन्न्पूर्ण पोस्ट् दैनिकमा विस्तृतमा खबर छापिएको छ ।